Tag: fanabeazana lalina | Martech Zone
Tag: fanabeazana lalina
Ny fahatongavan'ny Marketing Immersive, ny asa fanaovan-gazety ary ny fanabeazana
Alarobia, Martsa 8, 2017 Harrison Painter
Ny zava-misy virtoaly sy fampitomboana dia hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ny hoavinao. TechCrunch dia maminavina fa ny AR finday dia mety ho tsena $ 100 miliara ao anatin'ny 4 taona! Tsy maninona na miasa amin'ny orinasan-teknolojia avo lenta ianao, na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mivarotra fanaka birao, ny orinasanao dia hahazo tombony amin'ny fomba miaina amin'ny traikefa amin'ny varotra lalina. Inona no mahasamihafa ny VR sy ny AR? Virtual reality (VR) dia fialamboly nomerika an'ny